सङ्क्र-मणमा कमी आएपछि अस्पतालमा घटे बिरामी, खाली हुँदै बेड ! – Yuwa Aawaj
जेठ १९, २०७८ बुधबार 331
काठमाडौँ : को’भिड–१९ को सङ्क्र’मण दरमा केही कमी आएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल अक्सि’जनसहितको उपचार कक्ष थप सञ्चालन नगर्ने जनाएको छ ।
अहिले स्वास्थ्य उपकरणसहित सञ्चालनमा आएका अस्पतालहरुमा पनि २० प्रतिशत मात्र को’रोनाका बिरामी रहेकाले कामपाले तत्काल थप उ’पचार कक्षको आवश्कता नरहेको जनाएको हो ।
दोस्रो लहरको को’रोना सङ्क्र’मण बढ्दै गएपछि यसअघि कामपाले १२ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरी आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण र उपकरण खरिदका लागि आ’र्थिक सहयोग गरेको थियो । कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार अहिले सञ्चालनमा आएका अस्पतालमा पनि बि’रामीको सङ्ख्या कम रहेकाले तत्कालका लागि थप सञ्चालनको योजना नरहेको हो ।
“बि’रामीको सङ्ख्या बढे त्यसमा पुनः विचार गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कामपाको आर्थिक सहयोगमा सामाखुशीस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग भवनमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा ८८
अक्सिजनसहित १७४ शय्याको को’भिड–१९ आइ’सोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याए पनि हाल उक्त स्थानमा १६ वटा शय्या मात्र सञ्चालनमा आएको छ ।” उहाँका अनुसार धेरै सङ्क्रमित घरमै आइसोलेशनमा छन्, केही मात्रै अस्पताल गएकाले पनि निर्माण भएको अक्सिजन’सहितका अस्पतालहरुमा श’य्याअनुसार बि’रामी नभएका हुन् ।
त्यस्तै कामपाकै सहयोगमा सञ्चालित छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पताल पनि जम्मा सङ्ख्याको २० प्रतिशत मात्रै को’रोनाका बि’रामीले उपचार गराइरहेको कामपाको भनाइ छ ।
हाल कामपामा ६१ हजार ९२४ को’रोना सङ्क्र’मित रहेकामा ५० हजार ६८९ जना निको भएका छन् भने १० हजार १२५ होम आइ’सोलेशन र १७० संस्थागत आइसो’लेशनमा रहेका छन । त्यस्तै हाल १० हजार ८१६ सक्रि’य सङ्क्र’मितमध्ये ५२१ ले अस्पतामा उप’चार गराइरहेका छन् ।
कोरो’नाका कारण ४१९ जनाले ज्या’न गु’माएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । को’भिडका बिरा’मीलई उप’चारमा सहज होस् भन्ने हेतुले नागरिक हट लाइन ११८० बाट २४ सै घण्टा सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
वि’रामीलाई अस्पतालमा पुग्न सहज होस् भनी को’भिड–१९ का बिरा’मीका लागि फोन नं १०२ मार्प’त १० वटा र नन् को’भिड बि’रामीका लागि १० वटा गरी कूल २० वटा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कामपाले सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी माध्यमबाट हालसम्म २२ हजार को’भिड सङ्क्र’मित बिरामी र १२ हजार नन् को’भिड बिरा’मीले सेवा लिएका छन् । – रासस
Prevनेपाल ‘विश्वकप’ छनोटको अर्को चरणमा पुग्ला? यस्तो छ सम्भावना र लक्ष्य ।
Nextस्वास्थ्यकर्मी मा’थि आ’क्रमण गर्नेलाई दुई लाख जरि’वाना सहित ४ वर्ष जे’ल ।